Moyes oo qiray in Bale uu ahaa bartilmaantiisa koobaad xilligiisa United-ka. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Moyes oo qiray in Bale uu ahaa bartilmaantiisa koobaad xilligiisa United-ka.
Moyes oo qiray in Bale uu ahaa bartilmaantiisa koobaad xilligiisa United-ka.
Posted by: radio himilo December 24, 2016
England – Tababarihii hore ee kooxda Man United, David Moyes ayaa tilmaamay in ciyaaryahannada kala ah Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas iyo Toni Kroos ay ahaayeen bar-tilmaameedkiisa koobaad xilligii uu leylinayay kooxda Shayaadiinta Cascas.
Hoggaanka Sunderland, mr. Moyes ayaa joogitaankiisa United ku macneeyey maalmo ay suura-gal u noqon weysay helidda tiirar adag oo uu ku taamayay inay la xoojin doonaan sara u kaca kooxda.
Wuxuu sheegay in dhamaan ciyaartoyda waaweyn ee uu daneynayay saxiixyadooda ay ahaayeen kuwo la dhacsanaa qeyb ahaan joogitaanka naadiyadooda. Balse wuxuu carabaabay inuu hir-galay saxiixa Marouane Fellaini oo kala tirsanaa kooxda Everton.
“Markii aan ugu horreyn abbaarsaday bartilmaameedkaygii koobaad ee Gareth Bale, waxaan dareensanaa inuu yahay laacib reer Unitedka ah,” ayuu yiri Moyes kaas oo kooxda kaga tagay heerka toddobaad ee kala horreynta PL England.
“Ilaa dhamaadka ayaa ku mintiday xero-gelintiisa, waxaan ugu yeeray qandaraas ka weyn midka Madrid: balse isaga ayaa damacsanaa aaditaanka naadiga Madrid.”
“Laacibka kale wuxuu ahaa Febregus kaas oo aan cagcagta u saarnay ilaa aan ku quusanay.”
“Waxaan xusuustaa markii aan ugu horreyn la kulmay Sir Alex, wuxuu ii sheegay inay jirto fursad dib lagu soo xero-gelin karo Christiano Ronaldo.”
“Ma damacsaneyn keenista ciyaartoy badan: waxaan dareensanaa in laacibiinta joogta ay fursad u heli kareen sameynta rikoor cusub.”
Wuxuu qiray in, in kasta oo uu dhameyn karay heshiis Tooni Kroos uu hadana ka gaabiyay sababo ku aadan inuu wali quudarreynayay helitaanka saxiixa Gareth Bale.
Ugu danbeyntii, Moyes ayaa sheegay inuu dareensanaa in Mourinho iyo Van Gaal ay labadu halgan ugu jireen la wareegitaanka maamulka Man United-ka. Si walba oo ay tahayse, wuxuu farta ku fiiqay in shaqada uu baneeyey khabiir sida Ferguson oo kale ah ay adag tahay in dhib yaraan lagu buuxiyo.
Previous: Waayeel Masiix ah oo arday Muslimiin ah Qur’anka u dhiga
Next: Oscar oo ugu danbeyntii rikoor cusub kula biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan